Kheyre Oo Wasiir Cusub U Magacaabay Wasaaradda G/dhigga DF-ka.
Sunday November 26, 2017 - 10:20:27 in Wararka by Super Admin
R/wasaaraha xukuumadda DFS ayaa soo magacaabay wasiir cusub oo buuxinaya jagadii uu baneeyay Cabdi Rashiid Cabdullaahi Max'med.
Max'med Mursal oo horay u ahaa wasiirkii Tamarta ayaa loo magacaabay wasiirka cusub ee wasaaradda G/dhigga sida lagu sheegay war qoraal ah oo kasoo baxay Xasan Cali Kheyre R/wasaaraha dowladda Federaalka.
Mursal oo kasoo jeeda gobolka Bay ayaa ahaa siyaasi xilal kala duwan kasoo qabtay dowladda Federaalka iyo dowladdii dhexe ee Max'med Siyaad Barre madaxda ka ahaa, wasaaradda G/dhigga DF-ka ayaa mudda bil ah wasiir la'aan aheyd kadib markii uu iska casilay wasiirkii horay u haayay jagadaasi.
Max'med Mursal wax aqoon ah umalahan arrimaha melleteriga waxaana horyaal caqabadihii uu isku casilay wasiirkii isaga ka horreeyay, dowladda Federaalka malahan ciidamo taya leh waxayna dowladdu ku tiirsantahay ciidamada Itoobiya iyo kuwa AMISOM ee dalka kusoo duulay.
Kumanaan kun maleeshiyaad soomaali ah oo magaca DF-ka ku howlgala ayaa ku nool raashinka haraadiga ah ee ciidamada shisheeye isticmaalaan halka aysan helin mushaar joogta ah.
Dhinaca kale Xasan Cali Kheyre ayaa xilkii uu hayay ka xayuubiyay Iimaan Cabdullaahi Cali oo ku magacaawnaa wasiirka wasaaradda Awqaafta iyo arrimaha diinta oo ah wasaarad magac uyeel ah maadaama dowladda Federaalka ah ay tahay dowlad calmaani ah oo aan diinta ku dhaqmin.